Kim Jong-un oo kulan ku casuumay madaxweyne Trump - BBC News Somali
Image caption Gacan qaadkii ku dhex maray Singapore
Afhayeenka aqalka cad, Sarah Sanders, ayaa sheegtay in "warqadda loo qoray sida diirran" ay muujisay sida ay xukuumadda Pyongyang "wali diyaar ugu tahay barnaamijka burburinta Nukliyeerka".
"Soo jeedintan aasaasiga ah ee lagu soo gudbiyay warqadda waxaa nalooga codsaday jadwaleynta kulan hor leh oo lala yeelanyo madaxweynaha, arrintaasoo aan annaguba sii qorsheyneynay" ayay tiri Ms Sanders.
Dhanka kale, Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, Moon Jae-in, ayaa soo dhaweeyay warkan, isagoo sheegay in "dhameystirka wada xaajoodka hubka Nukliyeerka looga burburinayo gacanka Kuuriya ay tahay arrin aasaas u ah xal u helidda ismaan dhaafka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi".
'Mid aad u diirran, oo dhinaca fiican ah'
Ms Sanders ayaa sidoo kale ammaantay dhoolla tuskii milatari ee ay dabayaaqada usbuuci la soo dhaafay sameysay Kuuriyada Waqooyi, iyadoo sheegtay in "markii dhinac laga eego uusan dhoolla tuska ku jirin hubka Nukliyeerka". Waxay arrintaas ku tilmaantay iney ku timid "guusha ka soo hoyatay" dadaalkii uu bixiyay madaxweyne Trump.
Image caption Milateriga Kuuriyada waqooyi sooma bandhigin madaxyada Nukliyeerka
Mr Trump ayaa qudhiisa mahadnaq u jeediyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo adeegsanayay bartiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in dhoolla tuskaas uu ahaa "mid weyn oo dhanka fiican laga abbaaray."
"Mahadsanid gudoomiye Kim. Labadeennuba waxaan caddeyn doonnaa inuu qof kasta khaldanyahay!". Ayuu yiri Trump.